आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहनुभएको छैन ? दिमागमा ताजापन यसरी ल्याउनुहोस् - Sakaratmak Soch
आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहनुभएको छैन ? दिमागमा ताजापन यसरी ल्याउनुहोस्
कामकाे उत्पादनशिलता चाहे अनुसार ल्याउनकाे लागी काम गरेर मात्र हुँदैन । काममा शतप्रतिशत दिनुपर्छ । त्यसकाे लागी आफ्नाे पुर्ण ध्यान काममा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ । बिहानमा याेगा या ध्यान गर्ने गर्नुहाेस् । यसले दिमाग शान्त बन्छ । दिमागमा ताजापन आउँछ । जसले गर्दा काम गर्दा दिमाग काममा केन्द्रित हुन्छ र काम सिर्जनात्मक बन्छ ।
अहिले हामी सामाजिक सँजालकाे धेरै प्रयाेग गर्ने गर्छाैँ । सामाजिक सँजाल प्रयाेग गर्नु नराम्राे हुँदै हाेइन, तर कामकाे समयमा भने सामाजिक सँजालबाट केही छिन टाढा हुनुपर्छ । यसकाे लागी माेवाइलमा आउने नाेटिफिकेसनहरूलाइ अफ गर्ने गर्नुपर्छ । मानिस सधै काममा लागेर मात्र हुँदैन ।
आफ्नाे व्पाक्तिगत र सामाजिक जिवन पनि हुन्छ । तर कामकाे समयमा भने व्याक्तिगत र सामाजिक कुराहरूले ध्यान बाँडिन सक्छ । यसकाे लागी पहिले नैँ समय तालिका बनाउँदा आफ्नाे व्याक्तिगत र सामाजिक कामकाे लागी छुट्टै समय छुषट्याउनुपर्छ । एकै पटकमा धेरै काम गर्न खाेज्रु हुँदैन । एउटा काम सकेर मात्र अर्काे काम गर्नुपर्छ ।
प्रथमिकताकाे आधारमा कामलाइ छुट्याउन सकिन्छ । खाना खादै काम गर्ने, माेबाइल चलाउँदै काम गर्ने गर्दा काम हामीले जति राम्राे गर्न सक्थ्याैँ, त्यति राम्राे गर्न सक्दैनाैँ । यसले आफु धेरै ब्यस्त जस्ताे देखिए पनि काम भने थाेरै मात्र पुरा भएकाे हुन्छ । त्यसैले कामबाट केही छिन विश्रामकाे लागी समय निकालाैँ, खाना खाने समय निकालाैँ । तर खाना खाँदै या माेबाइल चलाउँदै काम गर्ने नगराैँ ।
तपाईंले देख्नुभएको होला प्रायः मानिसहरु आजभोलि कानमा ईयरफोन, हेडसेट लगाएर गीत सुनिरहको हुन्छन् । तर लामो समयसम्म ईयरफोनको प्रयोग गर्दा कानसँगसँगै ब्रेन टिशुजको पनि नोक्सान पुर्याउँछ । लगातार यसो गर्दा अल्जाइमरको समस्या हुन् ।
गल्ती कसले गर्दैन ? जानेर पो गर्नुहुँदैन । नजानेर हुने गल्तीका लागि धेरै मान्छे पछुताउँछन् । तर, यो बानी राम्रो होइन । एकचोटी भएको गल्तीलाई सम्झिरहँदा दिमागको क्षय हुन्छ । त्यसैले गल्ती नदोहोर्याउनेमा प्रतिबद्ध भएर पुराना गल्तीमा नअल्झिने सोच बनाउनुपर्छ ।
धेरै मान्छेले जिन्दगीमा दोहोर्याउने गल्ती हो यो । अरुले ‘राम्रो’ भन्दा मख्ख पर्ने र ‘नराम्रो’ भनेपछि खिस्रिक्क हुने प्रायः को बानी हुन्छ । यही गल्तीले मान्छेलाई निरन्तर पछारिरहेको हुन्छ । सधैँ अरुले हौसला प्रदान गर्दैनन् र सबै आफ्ना अनुकूल हुँदैनन् । अरुको नजरमा आफूलाई सही नदेखेकै अवस्थामा आफू गलत नहुन पनि सकिन्छ । त्यसैले सही सुझावलाई ग्रहण गर्ने तर उनीहरुको नजरिया अनुसार आफूलाई मूल्यांकन नगर्ने बानीले दिमागलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
सफलताको माथिल्लो सिँढीमा उनीहरु नै पुगेका छन् । मान्छेको दिमाग परिवर्तनलाई सदा स्वागत गर्छ । तर, समयसँगै आफूलाई बदल्न चाहन्छ । हामी यथास्थितिमा राख्न खोज्छौँ, जसले गर्दा बुद्धिको विकासमा असर पुर्याउँछ । परिवर्तनसँग डराउने होइन, डटेर सामना गर्ने विचारले दिमाग बढाउँछ ।
सामूहिक रोग हो, अर्काको प्रगतिमा जल्ने । आफ्नो सफलता भन्दा अर्काको असफलतामा रम्ने बानीले अन्ततः दिमाग नै त्यही रुपमा बदलिन्छ । नकारात्मक कुरालाई महत्व दिने ग्रन्थी दिमागबाट चाँडो निस्किन थाल्छन् । अन्तमा गएर आफ्नो सफलताका लागि भन्दा अर्काको असफलताका लागि दिमाग चल्छ । आफू अघि बढ्ने समय अर्काको खुट्टा तान्न खर्चिंदा कहिल्यै सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। अर्काको सफलतामा समेत रमाउने स्वभावको विकास गर्दा आफ्नो सफलताका लागि सोच्ने शक्तिको विकास हुन्छ ।
One thought on “आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहनुभएको छैन ? दिमागमा ताजापन यसरी ल्याउनुहोस्”
shreejana banjade February 4, 2020 at 1:39 pm · Edit